တစ်လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် နည်းလမ်း(၅)သွယ် (လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်) – Shwe Yaung Lan
HomeLifestyleတစ်လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် နည်းလမ်း(၅)သွယ် (လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်)
1. မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ 10ပုံ 2ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် မိဘများကိုလည်း လှူပါ
2. ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မည်မျှပင် အလုပ်ရူပ်သည် ဖြစ်စေ. တစ်နေ့လျင် 1နာရီမျှလောက် ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ
3. တိရစ္ဆာန် လေးများကို အစားကျွေးပါ။ မိမိတွင် အကျိူးထူးစေရန် မရည်ရွယ်ဘဲ ကြင်နာသနားစိတ်ဖြင့် ခို /ကျီး/ခွေး/ ငါး/ကြောင် အစရှိသည့် တိရစ္ဆာန် လေးများကို အစာကျွေးပါ
4. မည်မျှပင် အလုပ်မအားသည်ဖြစ်စေ. ပုံမှန် ဓိဌာန်တစ်ခု ဝင်ပါ။ ဥပမာ တစ်ရက်လျင် သရဏဂုံကို အခေါက်ရေ တစ်ထောင်ရွတ်ဖတ်ပူဇေိာခြင်း စသည်ဖြင့် ဓိဌာန်ဝင်ပါ။ မိမိအလိုချင်ဆုံး ဆုတစ်ခု တောင်းပါ
5. အားလပ်ရက်များတွင် ဘုရားရင်ပြင်တော်ကို တံမြက်စည်းလှည်းပါ။ အညံအဆိုးများ လွတ်ပါစေဆုတောင်းပါ
တစ်ခါက အင်္ဂလိပ်လူမျိုး စိတ်ပညာရှင် ရစ်ချတ် ဝိုက်စ်မန်း ဆိုတဲ့ လူဟာ ကံကောင်း ကံဆိုး အယူအဆနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆယ်နှစ်ကြာသုတေသန တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီစိတ်ပညာရှင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကံအရမ်းကောင်းတယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ လူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကံမကောင်းဘူးလို့ တွေးထားတဲ့ သူတွေကို သူ့ဆီ ဆက်သွယ်လာဖို့ သတင်းစာထဲမှာ ကြော်ငြာထည့်ခဲ့ပါတယ်။ လူတန်းစား အလွှာစုံ နယ်ပယ်စုံက အယောက် (၄၀၀) လောက် သူ့ဆီ ဆက်သွယ်လာတယ်။
စိတ်ပညာရှင်က စမ်းသပ်မှု တစ်ခုအနေနဲ့ အဲဒီ လူတွေကို အမျိုးအစားတူ၊ ရက်စွဲတူ သတင်းစာ တစ်စောင်ပေးပြီး ဒီ သတင်းစာထဲမှာ ပုံ ဘယ်နှစ်ပုံ ပါသလဲ ဆိုတာ ရေကြည့်ခိုင်းတယ်။
ကံမကောင်းဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်တဲ့ သူတွေဟာ နှစ်မိနစ်လောက် ကြာပြီးတဲ့ အခါမှာ ပုံ အရေအတွက်ကို ပြောပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကံကောင်းပါတယ်လို့ ဆိုသူများကတော့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အဖြေမှန်ကို ပြောပြနိုင်ခဲ့ပါသတဲ့။
ဘာလို့ ဒီလို ဖြစ်ရတာလဲ၊ ဟိုလူတွေက တကယ်ပဲ ကံ ပိုကောင်းနေသလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ အဲဒီ သတင်းစာတွေရဲ့ ဒုတိယ စာမျက်နှာမှာ “ဆက် မရေနဲ့တော့။
ဒီ သတင်းစာမှာ ပုံ စုစုပေါင်း ၄၁၃ ပုံ ပါတယ်“ လို့ ထင်သာမြင်သာတဲ့ စာလုံးအရွယ်အစားနဲ့ စာရေးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကံမကောင်းဘူးလို့ ယူဆတဲ့ သူတွေက ဒါကို မမြင်ခဲ့မိတာပါ။
ဖြစ်လာတယ်လို့ တွေးကြည့်လိုက်။ ဓားပြတစ်ယောက်က ပစ်လိုက်တဲ့ သေနတ်ကျည်ဆံဟာ ခင်ဗျား လက်မောင်းကို လာမှန်တယ်။ အဲဒါ ကံကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်လား ကံဆိုးတာလား။
အဲဒီ မေးခွန်းကို ကံဆိုးသူတွေက “ဟာ … ကံဆိုးတာပေါ့။ နေရင်းထိုင်ရင်း လက်ကို ကျည်ဆံလာမှန်တာ“ လို့ ဖြေပါတယ်။ ကံကောင်းသူတွေကတော့ “ကံကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ လက်ကိုပဲ မှန်တာလေ… သေနိုင်တဲ့ နေရာတွေ မှန်သွားရင် ဒုက္ခ” လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ ကံကောင်းသူတွေဆိုတာဟာ တကယ်တော့ အကောင်းမြင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေ ဆိုးဆိုးရွားရွားတစ်ခုခု ဖြစ်လာရင်တောင် ဒီထက် ပိုဆိုးသွားနိုင်တာကို တွေးပြီး စိတ်ကို ကြည်ရွှင်အောင် ထားနိုင်သူတွေပါ။
Credit – ကျော်သန့် (ရိုးရာလေး)